Lost Circulation Agents-OBC-B62S - Sina Tianjin Oilbayer S & T
Ranon Loss Additives
Spacers sy ny Flushes
Ranon-javatra ary atsofony Additive
Anti-sloughing sy fibahanana tonga dia mandefa radio mpandraharaha
Oil-base ary atsofony tsiranoka additive
Tsara HTHP cementing
Oil-base ary atsofony tsiranoka teknolojia
Product News & Fampandrenesana
Ranon Loss Additives-OBC-G80S
Ranon Loss Additives-OBC-G75S
Very famintinana Circulation Additive OBC-B62S dia mifangaro ny mineraly sy ny synthetic kofehy, izay ampiasaina mba hanatsarana ny mandefa-porofo fahaizany ny simenitra slurry na preflush. Ny vokatra no mandrafitra ny hafa lavany, hafa dilatra, ary samy hafa hakitroky ny fibre, ary manana avo rano dispensability, ary dia mora ny mitovy ny sy stably hiparitaka amin'ny simenitra slurry ary hanorina tetezana rafitra in leakage mahomby hisorohana ny fisian'ny ny ambanin'ny tany leakage . Rehefa levitra dia 3.0kg / m3, dia ca ...
Lost Circulation Additive OBC-B62S dia mifangaro ny mineraly sy ny synthetic kofehy, izay ampiasaina mba hanatsarana ny mandefa-porofo fahaizany ny simenitra slurry na preflush. Ny vokatra no mandrafitra ny hafa lavany, hafa dilatra, ary samy hafa hakitroky ny fibre, ary manana avo rano dispensability, ary dia mora ny mitovy ny sy stably hiparitaka amin'ny simenitra slurry ary hanorina tetezana rafitra in leakage mahomby hisorohana ny fisian'ny ny ambanin'ny tany leakage . Rehefa levitra dia 3.0kg / m 3, dia mety hanatsara ny compressive hery hatramin'ny 5 MPa ambany ny toe-0.5mm hirika teo amin'ny slurry. Misy tsy levitra, ary kely kokoa ny slurry tsy tapaka, ary tsy misy vokany ratsy eo amin'ny hafa fananana, ary dia mety ho isan-karazany ny hetsika cementing 150 ℃ eto ambany.
Dispensability rano amin'ny avo, ary mora ny hametraka sy hiparitaka any amin'ny slurry.
Afaka hahatratra famehezana tsara kokoa vokatry amin'ny ambany levitra.
Tsy misy vokany eo amin'ny ratsy lehibe amin'ny fanatanterahana ny slurry.
Azo ampiharina amin'ny isan-karazany, dia azo ampiharina amin'ny isan-karazany ny asa cementing 150 ℃ eto ambany.
nampiasaina tamin'ny preflush sy fampifangaroana simenitra slurry: hatrany hametraka ity vokatra avy amin'ny sakafo Hopper ary afangaro tanteraka izany rehefa avy nanomana preflush na fampifangaroana simenitra slurry.
Ampiasaina ao amin'ny dingan'ny cementing: hanopy ho any an-simenitra slurry mampifangaro tanky sy mitovy hatrany ary pumping rehefa fampifangaroana.
Recommended levitra: hametraka ny vokatra 3.0 ~ 4.0 kilao isaky ny metatra toratelo ny simenitra slurry na preflush.
Mangarahara na ny sampahom-boaloboka kofehy fotsy
Ampahany Density, g / sm 3
Density tanteraka, g / sm 3
1.45 ± 0,05
pH (2% aqueous vahaolana)
Fibre Length, MG
Tokony ho voatahiry ao mangatsiatsiaka, maina sy ventilated faritra ary tsy ho hita ny masoandro sy ny orana.
Talantalana fiainana: 12 volana.
Previous: Maivana Agents-OBC-P62S
Anti- Sloughing Ary Hanakatona tonga dia mandefa radio Agent
nanasitrana sy Cementing Agent
Emulsifiers Ary Wetting Agents
Ground marbra Bridging Agent
Ranon Loss Additives-OBC-G80L
Spacers sy ny Flushes-OBC-S32S
Ranon Loss Additives-OBC-G86S
6-1-804, Xinyi Bay, Tanggu Marina Hi-Tech Park, Binhai Hi-Tech Development Area, Tianjin